Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ụgbọ elu Toronto na Mont-Tremblant na Porter Airlines ugbu a
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Flightgbọ elu Toronto na Mont-Tremblant na Porter Airlines ugbu a.
N'ihe dị ka nkeji iri asaa, ndị njem nwere ike isi n'ọdụ ụgbọ elu Billy Bishop Toronto gaa ọdụ ụgbọ elu Mont-Tremblant International.
Ọrụ oge Porter Airlines ga-amalite na Disemba 17 ma na-agba ọsọ ruo Machị 28, 2022.
Ụgbọ elu ijikọ dịkwa site na ebe dị iche iche Porter Airlines' Canada.
Ndị njem niile gafere afọ 12 na ọnwa anọ na-apụ n'ọdụ ụgbọ elu Canada ga-enyerịrị ihe akaebe ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa tupu ha abanye, dị irè na November30.
Ụgbọ elu Porter na-eweghachite ọrụ oge ya na Mont-Tremblant, Que., na oge ezumike. Ọrụ oge na-amalite na Disemba 17, na-aga ruo Maachị 28, 2022.
Michael Deluce, onye isi ala na onye isi ala, Porter Airlines kwuru, "Anyị dị njikere ịlaghachi n'ebe mbụ anyị na-aga n'oge oge kemgbe ịmalitegharị ọrụ na Septemba. "Mont-Tremblant so na ebe mbụ Porter na-aga mgbe ụlọ ọrụ ụgbọ elu tọrọ ntọala, ndị njem anyị na-enwekwa mmasị n'ụdị dịgasị iche iche nke oge oyi ọ na-enye."
N'ihe dị ka nkeji iri asaa, ndị njem nwere ike isi n'ọdụ ụgbọ elu Billy Bishop Toronto gaa ọdụ ụgbọ elu Mont-Tremblant International. Ụgbọ elu ijikọ dịkwa site na ebe Porter dị iche iche. Usoro oge oyi na-agụnye ụgbọ elu anọ kwa izu.
N'ịgbaso iwu ịgba ọgwụ mgbochi nke Gọọmenti Canada maka ndị njem ụgbọ elu, ndị njem niile gafere afọ 12 na ọnwa anọ na-apụ n'ọdụ ụgbọ elu Canada ga-enyerịrị ihe akaebe ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa tupu ha abanye, dị irè na Nọvemba 30.
Ortergbọ elu ụgbọ elu bụ ụgbọ elu mpaghara nke hiwere isi na ọdụ ụgbọ elu Billy Bishop Toronto na Toronto Islands na Toronto, Ontario, Canada. Onye nwe Porter Aviation Holdings, nke a na-akpọbu REGCO Holdings Inc., Porter na-eji ụgbọ elu ndị Canada wuru mgbe niile n'etiti Toronto na ebe dị na Canada na United States. Bombardier ụgbọ elu Q400 turboprop.